China New Design 4 na -ejikwa Ngwa EMS Emsculpting Electro Slimming Muscle Stimulation Machine ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ya | Nubway
4 na -ejikwa igwe ịkwọ slimming Emsculpting
eriri na -adị jụụ n'etiti mkpali ụjọ ọ bụla. sculpting Pro na -ewepụta mkpali n'oge ọsọ ọsọ nke na ọ naghị
Ogologo obosara 310us ± 10%
Voltaji AC220V+10% 10A 50HZ, 110v ± 10% 10A 60HZ
Jụrụ Igwe jụrụ oyi
Kedu ihe bụ HI-EMT?
Ngwa HI-EMT emebere maka ebumnuche ịchọ mma, nwere ndị na-achọ akwụkwọ abụọ (abụọ) nwere nnukwu ike. Ọ bụ teknụzụ dị oke ọnụ na contouring ahụ na-adịghị emerụ ahụ, n'ihi na ọ bụghị naanị na-ere abụba, kamakwa ọ na-ewuli akwara.
Tụkwasị na nke a, ọgwụgwọ ahụ achọghị nrịanwụ, mbepụ, ma ọ bụ ahụ erughị ala. N'ezie, ndị ọrịa na -enwe ike ịnọdụ ala ma zuru ike, ebe ngwaọrụ a na -eme nhata ihe karịrị 20,000 mgbu ma ọ bụ squats na -enweghị mgbu.
HI-EMT (Onye na-enye akwara akwara ike dị elu) bụ teknụzụ ọgwụ a na-eji na ọgwụ ịchọ mma. Ọ na-eji elektrọnik elekwasịrị anya nwere oke ike dị mma. Ogwe eletrọnịk na-agafe ahụ na-adịghị emerụ ahụ ma na-ejikọ ya na neurons moto nke na-ebute mgbagha akwara kacha elu. Teknụzụ ahụike na-adịghị emerụ ahụ nke a na-eji maka ume na ịmaliteghachi mmụta akwara site na mmekọrịta ndọta na anụ ahụ onye ọrịa.
N'adịghị ka nsụkọta akwara afọ ofufo, mgbatị kachasị elu anaghị arụ ọrụ n'ụbụrụ. HI-EMT na-eji otu ugboro ugboro nke na-anaghị ekwe ka izu ike dị n'etiti mkpali abụọ na-aga n'ihu.
Nke gara aga: Igwe mkpagharị mkpanaka 3 Diode Laser na -ebugharị ebugharị
Osote: Ndị China na -ere ahịa China Israel Teknụzụ RF Fractional Gold RF Microneedle/Igwe na -enweghị isi na igwe mma ahụ